रोचक तथ्य: त्यहाँ शहरी क्षेत्रमा यातायात दुर्घटना गलत छ हो कि सबै भन्दा बारम्बार कारण एक उल्टो मा पार्किंग। पार्किङ सहायक - त्यो पनि एक विशेष सेन्सर संग मानक रूप कार को किन धेरै छ। वास्तवमा, यो निकटतम कार वा अन्य कुनै पनि "अवरोधहरू" गर्न वाहन को दूरी स्क्यान जो बम्पर को बिन्दु स्थापित केही radars छ। सबै अध्ययनहरू को सानो घर मा स्क्यानर गरेको सामने प्यानल प्रदर्शित छन्। तर, हामी यस उपकरणको intricacies मा जान, तर तपाईँ आफ्नो हातमा पार्किङ सेन्सर स्थापना कसरी हेर्न।
सबै को पहिलो, तपाईं कहाँ यसलाई एक वा अन्य सेन्सर सञ्चालन हुनेछ बुझ्न पर्छ। वास्तवमा, उहाँले अप संकेत कुनै पनि उचाइ मा तथापि, गवाहीलाई सबैभन्दा सही ड्राइवरों बम्पर भित्र यसलाई इकट्ठा थियो उठयो। Wherein बल सदस्य, हटाइयो र drilled सानो खाडल मा धेरै अंक छ। गर्न पार्किंग सेन्सर स्थापित आफ्नो हातले, तपाईं बम्पर28 प्वालहरू ड्रिल गर्न आवश्यक छ। कति प्वालहरू PDC को प्रकार र मोडेल निर्भर हुनेछ। तदनुसार, अधिक को सेन्सर, अधिक कठिन यो स्थापना गर्न, किनभने ती प्रत्येक व्यक्तिगत केबल एक नम्बर जडान गर्न आवश्यक छ।
मोडेल कस्तो हुनेछ आधारमा पार्किङ सेन्सर, स्थापना तपाईंको आफ्नै हातमा दुई तरिकामा गर्न सकिन्छ। विशेष, यो ती नै सेन्सर सम्बन्धित छ। त्यहाँ एक बिल र फ्लस स्थापना हो। उत्तरार्द्ध, प्रसंगवश, सबै भन्दा रूसी मोटर चालकहरुलाई बीच साधारण छ। उनको हामी प्रयोग गर्नेछ। यसो गर्न, तपाईं (प्रत्येक एक समयमा एउटा सेन्सर लागि) को बम्पर केही प्वालहरू बनाउन आवश्यक, र तिनीहरूले एक ड्रिल र कटर संग ड्रिल गर्न आवश्यक छैन। यो सामान्यतया पहिले नै समावेश गरिएको छ।
त्यसैले, हामी आफ्नै पार्किङ सेन्सर बम्पर मा इकट्ठा। तपाईंको आफ्नै हातमा (फेरि यो सेन्सर लागू) स्थापना यी उपकरणहरू दायरा केही अनुपालन मा बाहिर हुनुपर्छ। को impactor शक्ति को परिधि मा उनलाई राख्न तिनीहरूले समान रूप दोश्रो देखि अन्तरालमा ताकि हुनुपर्छ। यो सेन्सर किनभने जो को मुख्य मा, "मरेको क्षेत्र" पत्ता लगाउन सक्षम छ भन्ने सुनिश्चित गर्न, र दुर्घटना हुँदा पार्किङ आउँदैन।
माउन्ट पार्किङ सेन्सर: आफ्नो ताराहरु हतियार स्थापना
स्थापना को सबै भन्दा कठिन भाग मा, हामी पहिले नै समझ गर्नुभएको बाहिर, र अब यसलाई आवश्यक केबल जडान गर्न मात्र रहनेछ। कट-मा सेन्सर तपाईंलाई छिटो र सजिलै तार संलग्न गर्न सक्छन् जो मार्फत विशेष सील connectors, छ भनेर याद गर्नुहोस्। को ब्रेक प्रकाश देखि प्रमुख तार जडान गर्न अन्तिम। सिद्धान्त मा, त्यसपछि हामी तयार र कार्य पार्किङ सेन्सर हुनेछ। यो चरण मा तपाईंको आफ्नो हात स्थापना पूरा भएको छ। यसका अतिरिक्त, तपाईं अगाडि पार्किङ राडार बन्द बटन बनाउन सक्छ। यो तपाईं अगाडि कार नजिक ड्राइव squealed एक ट्राफिक जाम parktronic मा सुनिश्चित गर्न गरिन्छ।
घर मा धातु कसरी कठोर गर्न?
आफ्नै हातले ढोका माथि चदंवा कसरी बनाउने?
एक लुगा धुने मेसिन मर्मत मा इन्जिन कसरी जाँच गर्ने?
किन र कसरी घर जुटाउने?
यार्ड कसरी सजाउनु गर्न? स्मार्ट हुन!
को RTS सूचकांक - यो के हो? तालिका RTS
एकीकृत मार्केटिङ संचार: तत्व, रणनीति, व्यवस्थापन
"बिरालोहरु लागि Fortiflora": प्रयोगको लागि निर्देशन
ड्रोबिट्सकी यार - होलोकस्ट को एक भयानक प्रतीक
डिजाइन र सुविधाहरू: मिनी ट्रयाक्टर लागि रोटरी घास काटन मिसिन